Ukuqondanisa i-KDM + KSplash yeSlackware | Kusuka kuLinux
Ngiyethemba ukujabulisa abasebenzisi be- Slackware+KDE ukuthi bayasifunda 🙂
Iyahlola I-KDE-Bheka Ngithola umdlalo we I-KDM+I-KSplash ukuthi yize kuyinto endala, ukubukeka kwayo akukubi 😀
Njengoba ukwazi ukubona ... kusuka lapho i-KDE 4.2, kepha ayimbi neze ... ngishiya izixhumanisi zokulanda 😀
Landa itimu ye-KDM
Angicabangi ukuthi kunesidingo sokuchaza ukuthi ungazifaka kanjani, akunjalo? … Uma usebenzisa iSlackware, lokhu kuzoba ukudlala kwengane kuwe LOL !!! 😉
Noma kunjalo, ngithemba ukuthi othile uzokuthakazelisa, mhlawumbe uma uthanda futhi ungasebenzisi le distro ... khumbula ukuthi ungakuguqula kalula lokhu 😉
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Ukuqondanisa i-KDM + KSplash yeSlackware
Ngicabanga ukuthi kufanele kube lula ukuguqula isithombe sifunde i-kde 4.8 xD ...
Ngokuvamile, kulula kakhulu: ifayela lengqikimba likhishwe uziphu, i-png, i-jpeg, njll. Liyaseshwa futhi liguqulwe ukuze lilungele umthengi. Ngemuva kwalokho yonke into iphindwe yafakwa futhi yafakwa ngokujwayelekile. Kuyindlela engiyisebenzisayo ukuthinta izingqikithi ezithile noma ukuzenza ngilinganise, futhi kuthatha cishe isikhathi.
Ngubani othembisa ukwenza noma yiziphi izinguquko? 🙂
Ngifuna ukuletha ingqikithi ye-Slim ku-KDM ... engiyithandile, kepha yenzelwe uSlim hehe.
Yebo, ngicabanga nokuthi ukukuguqula kuzoba ukudlala kwengane, kufanele ube nenhle kakhulu ukuze ube ne-slackware futhi uyenze ihlale ngaphandle kwe-petarte ...
Kepha ngicabanga ukuthi umlingo ukuxhomeke nakuma-tarball abo
Akunzima ukuyenza ihlale ngaphandle kokuyiphula. Imfihlo ukwenza isipele lokho ozokuguqula noma okuhlangenwe nakho kumshini obonakalayo ngaphambi kokwenza ukuguqulwa kohlelo lwakho.
Mayelana nokuncika ... uff ukuthi ukuzixazulula ngesandla ukulethwa kepha kukhona amakhasi asizayo namaphrojekthi angazixazululi ngokusemthethweni.
Mayelana neKSplash… kuhle 🙂
efanelekile ulungile imishini ebonakalayo yenzelwe lokho.
Noma kunjalo, kubukeka njenge-distro eyinkimbinkimbi, ngingasho ngisho ngaphandle kokwesaba ukuba nzima kakhulu emhlabeni gnu / linux.
I-Gentoo inzima kepha okungenani ine-portage, i-slackware ngiyazi ukuthi nayo ingasebenzisa into efana ne-apt, kepha angicabangi ukuthi bekuyi-100% slack, ukuxega kwami ​​ukuyisebenzisa nge-tarballs, ngidle imibhalo mayelana nokuncika futhi lungiselela yonke into ngesandla, noma yini elula…
I-distro ye-nerd enesikhathi esiningi samahhala kune-cain
Zonke izizathu ngeGentoo. Futhi yize kukhona amathuluzi afana ne-apt, kukhona iphrojekthi ebizwa ngeSlackBuilds.org eyimibhalo yokufaka yezinhlelo ezahlukahlukene, ayixazululi ukuncika kepha ikutshela kuma-readme's. Ngenze imibhalo embalwa yaleyo projekthi futhi manje ngenza enye ye-emesene. Futhi yilokho engikwenzayo xDDDDD
Ukhohlwa i-Linux kusuka ku-Scratch hehehe
kanye neLunar neMinix ????
Okwabo ukubamba i-distro evuthwe ngokwanele ukuze ingadoti futhi ube nemibhalo, asihambe.
Ubani umpimpi ohamba nge-linux kusuka ekuqaleni futhi esikhathini esingaphansi kosuku useqedile, noma ngabe ukube ukwenzile lokho anginaso isikhathi noma ulwazi, umphathi we-pacman angaya kusaka.
Kimi ngumphathi omuhle kakhulu ngaphandle kokubukela phansi abanye, izinkinga ezisheshayo futhi ngaphandle kokuncika (futhi angibheki noyedwa wabo !!!) Lol !!!
Ngibona iSlackware izinze kakhulu, yize ukufunda imibhalo yesandla kusukela lapho uStallman wayengenayo intshebe kubonakala kungisinda kakhulu, yize noma ngubani okwenzayo engikuthandayo!
UGaara ukubona ukuthi leso sifundo sokuvilapha sikumodi encane yobungcweti 🙂